Yedzidzo muUkraine. Inobatsira Info vadzidzi vokune dzimwe nyika
Ukrainian dzidzo gadziriro iri noMutemo rweUkraine uye rinosanganisira:
vanoenda kukireshi dzidzo;
hwokugadzira uye yekosi dzidzo;
For Ukrainians, kufanana vokuEurope zhinji, dzidzo rinotanga yunivhesiti rokudzidzisa kuvapo chikoro, kazhinji – kubva kukireshi. mu 2 (dzimwe nguva 1.5), nembudzana anowana muchidyiro, ne 3 – muboka muduku.
dzimwe nguva, mhuri yasarudza kudzidzisa mwana pamba, asi kubva 2001, vanoenda kukireshi dzidzo zvairayirwa vana 5 makore. Vabereki vanogona kusarudza kindergartens kana boka pfupi mutsigiri, zvino kupfuura 1,000 dzakadaro mapoka uchishanda muUkraine. Muzvikoro yechipiri vachishanda boka kugadzirira vana kuti chikoro. vadzidzi Future ikoko kugamuchira ruzivo inokosha, uyewo tinyatsoziva nzira chikoro, Vadzidzisi uye navo. ne 6 makore ane mwana anogona kuenda kuchikoro.
Hazvina mutemo unoti uye inotengwa mune mhando dzakasiyana zvikoro, kunyanya – vari yokusekondari. Rine zvitatu nhanho:
ini – vegiredhi (mamakisi 1-4), anopa mukuru dzidzo yepuraimari,
II – puraimari (mamakisi 5-9), anopa mukuru dzidzo inokosha;
III – chikoro chepamusoro (mamakisi 10-11), inopa dzidzo yakakwana yechipiri.
Kuronga dzidzo – -Kumativi ose kwemashoko mwana, achimupa kuti ruzivo, kunoda kuti vanhu. Chikoro chinofanira kusimudzira nyanzvi vazvitonge, kwomuviri uye paumbwe inokosha yetsika uye yetsika.
Zvimwe kusimudzira unyanzvi uye matarenda kubudirira mune dzisiri kudzidza. zvikoro izvi zvinosanganisira mitambo makirabhu, zvikoro ounyanzvi, dzakasiyana-siyana mudzidzi netsvimbo uye masangano akafanana, paruzhinji kana voga.
Technical uye yekosi dzidzo
It nezvezvandaifanira kuwana chaicho zvaanonyatsogona. saka, kwavari kuti akatuma masangano iwayo zvedzidzo kuti kudzidzisa kushanda ounyanzvi hwokugadzira. zvikoro izvi yekosi uye muzvikoro (va neuseza, zvekushandisa, yepamusorosoro), yemakambani chikoro-mukurima uye mafekitari, kudzidzisa nzvimbo nenzvimbo yakadaro. Ivo zvinosanganisirawo yekosi nzvimbo, kurovedza uye kudzidzisazve vashandi.
Zvikoro yekosi kazhinji pamwe chete emakambani – kudzidziswa makasitoma. Kuti vawane kushanda mudzidzi basa zvavo zvisingamanikidzirwi kuenda kuchikoro, nokuti unogona kurovedzwa zvakananga mukugadzira.
Cinema muUkraine ari muronga maererano hurongwa dzidzo dzakabudirira, izvo raitarisirwa UNESCO, Sangano nemamwe masangano dzakawanda. Rinotibatsira chinokosha zvesayenzi, nyanzvi uye hunoshanda kurovedzwa, kudzidzisazve uye zvinodiwa yevadzidzi.
Siyana kudzidza muna yepamusoro nemasangano akasiyana: nguva izere, maricho, kure kana zvabatanidzwa, izvo rinobatanidza zvakawanda siyana izvi.
For mumayunivhesiti, pane ina kwevari accreditation:
ini – zvekushandisa pachikoro uye noenderana dzidzo nemasangano;
II – College uye rinoringanidzwa naye yepamusoro masangano dzidzo;
III uye IV (zvichienderana migumisiro accreditation) – sangano, Conservatory, chikoro, yunivhesiti.
kubva 2008, ari chinodiwa kuti kubvuma kuti dzidzo yepamusoro kupfuura imwe nechitarisiko akazvimirira paakamubvunzurudza (UPE). mu 2016, vadzidzi kutora miedzo dzenyaya dzakadaro:
Ukrainian mutauro uye mabhuku, nhoroondo Ukraine (kubvira makarekare nanhasi), kemesitiri, Physics, bhayoroji, masvomhu, jogirafi, naizvozvowo – Chirungu, ChiSpanish, ChiJerimani, Russian uye French.
Ndapedza unogona kuwana dhigirii – vari post-akapedza kudzidza uye doctorate zveBhaibheri. Izvi zvinosanganisira kunyora uye kudzivirira chinyorwa – Miteva kana doctorate azvaitwa – uyewo nepaitengwa pakutsvakurudza uye kudzidzisa ruzivo.
dzidzo dhigirii zvinoita kuti vawane unyanzvi hutsva, basa kana basa. kazhinji, ichi kunoitika maererano atova dzidzo pachikoro yapfuura, kunyange unogona kuwana hachizi itsva uye unyanzvi. Kuti kudzidza dzidzo nemasangano Kudya (nzvimbo), mamwe nokudzidziswa kana kudzidzisazve, kuMudzidzisi vamapoka yepamusoro nemasangano, yekosi dzidzo nemasangano, kwesayenzi uye methodological muzinda yekosi dzidzo uye pedzimba nemasangano uye mabhizimisi.
TOP 7 michina mumayunivhesiti muUkraine 2016